Fitaovana madio sy fampiasa amin'ny efitrano fidiovana | Sina Fitaovana sy efitrano fidiovana China, mpanamboatra, mpamatsy
FFU dia fitaovana famatsian-drivotra terminal modular miaraka amin'ny heriny sy ny fiasan'ny sivana. Ny mpankafy mitsoka amin'ny rivotra avy eo an-tampon'ny FFU ary manivana azy amin'ny alàlan'ny HEPA (sivana avo lenta). Ny rivotra madio voasivana dia ampitaina amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra 045m / s ± 10. FFU dia be mpampiasa amin'ny efitrano madio 1000 kilasy na efitrano fidiovana 100 kilasy amin'ny indostrian'ny photoelectric, elektronika mazava, vera kristaly ranoka, semiconductor ary saha hafa.
Ny fonon-tànana mahatohitra menaka nitrile synthetic dia vita amin'ny fingotra nitrile synthetic amin'ny alàlan'ny dingan'ny famokarana manokana. Voavaha ny olana tsy ahavahan'ny fonon-tànana sy ny fonon-tànana latina. ny fonon-tànana nitrile dia manana fahombiazana tsara antistatika, tsy misy alèena proteinina, ahazoana aina, mora alefa kokoa.